अनुहारमा आउने गरेको साना सेतो दाना के हो ? यसलाई कसरी हटाउने ? – ramechhapkhabar.com
अनुहारमा आउने गरेको साना सेतो दाना के हो ? यसलाई कसरी हटाउने ?
आँखा, नाक, गाला वरपर भागमा पिप नभएको सेतो, पहेलो सानो दानाले सताउने गरेको पाइन्छ । यस्ता बिमिरालाई अङ्ग्रेजीमा ‘मिलिया’ भनिन्छ । यसको कुनै खास नेपाली नाम छैन । प्रायः ह्वाइट हेड जस्तै देखिने हुँदा अधिकांशले यसलाई ह्वाइट हेड नै सोचिरहेका हुन्छन् । तर, मिलिया अनुहारमा देखिने ह्वाइट हेड हैन । यो ह्वाइट हेडभन्दा फरक हुन्छ । ह्वाइट हेडमा पिप हुन्छ तर, मिलिया पिपले भरिएको हुँदैन । मिलियाका साना दानालाई हटाउन वा निचोर्न सकिँदैन ।
यो छालाको समस्याका कारण छालाको तल्लो सतहबाट आउने गर्छ । प्रायः अनुहारमा देखिने मिलिया धेरैजसो आँखाको तल, नाक, गाला, निधारमा आउने गर्छ । यो छालाको समस्या जुनसुकै उमेर तथा छालाको प्रकार भएका कसैलाई पनि हुन सक्छ । तर, यो समस्या सबैभन्दा बढी नवजात शिशुहरूमा र त्यसपछि युवामा देखिन्छ ।
मिलिया केराटिनको कारणले हुने हुन्छ । अर्थात् यो केराटिनले भरिएको सिस्ट हो । केराटिन मानव शरीरमा पाइने प्रोटिनको समूह हो जसले कपाल, छाला र नङको निर्माण र स्वस्थ वृद्धिका लागि जिम्मेवार हुन्छ । मिलिया हुनुको पछाडि कहिलेकाहीँ कुनै खास कारण हुँदैन । केराटिन छालाको मुनि फस्दा यसले छालामा सानो फोका जस्तो बनाउँछ ।
सामान्य भाषामा छालाको मृत कोषिका छालाको सतहमाथि आउँछ तब यसैले मिलियाको रूप लिन्छ । साथै, पोल्दा, छालाको सङ्क्रमण र फोकाले पनि मिलिया निम्त्याउन सक्छ । मिलिया खतरनाक स्थिति होइन, यो स्वास्थ्य समस्या नभई सौन्दर्य समस्या हो । मिलियालाई निचोर्ने, कोट्याउने तथा आफैँले निकाल्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । यसले चालामा थप समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
निचर्दा, कोट्याउँदा यसले छाला पोल्नुको साथै चिलाउने, सङ्क्रमण हुने तथा दाग बस्नेसमेत हुन सक्छ । यो मृत कोषिकाले गर्दा हुने भएकाले आफैंँ केही सातामा निको हुन सक्छ । तर, सौन्दर्य प्रभावित भएमा र लामो समयसम्म पनि मिलिया नगएमा यसलाई हटाउनका लागि केही चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ ।
एक विशेष चिकित्सकीय प्रक्रियाअन्तर्गत यसलाई सुईको माध्यमले छालाबाट बाहिर निकाल्ने गरिन्छ । यति मात्र नभई मिलियालाई हटाउन लेसरसमेत प्रयोग गरिन्छ ।